जेष्ठ १३ गते भण्डै ७ करोडको आईपिओ आउँदै — Motivatenews.Com
जेष्ठ १३ गते भण्डै ७ करोडको आईपिओ आउँदै
काठमाडौं – जेठ १३ देखि लगभग ७ करोडको आईपिओ निष्काशन हुुँदैछ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तिय संस्थाले जारी पूँजी २० करोड ७४ लाख रुपैयाँको ३२.५० प्रतिशत बराबरको आईपिओ सार्वजनिक निष्काशन गर्न लागेको हो ।
यसअनुसार कम्पनीले ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ७४ हजार कित्ता आइपिओ निष्काशन गर्नेछ । जसमध्ये ३३ हजार ७०० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरु र १० हजार ३७० कित्ता शेयर लघुवित्तका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ । ६ लाख २९ हजार ९३० कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन हुनेछ ।
धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका बमोजिम बाँडफाँड गर्दा आईपिओमा ६२ हजार ९९३ जनाले गोलाप्रथाबाट १० कित्ता शेयर पाउनेछन् । हाल तीन लाख भन्दा बढीले लघुवित्तको आईपिओमा आवेदन गर्ने गरेका छन् । यसअनुसार कम्पनीको आईपिओ १५ देखि २० प्रतिशत आवेदनकले पाउने देखिन्छ ।
उक्त आईपिओमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुले जेठ १३ देखि १६ गतेसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन् । आवश्यक आवेदन नपरेको खण्डमा भने असार १० गतेसम्म बिक्री खुला रहनेछ।
लघुवित्त कम्पनीको आईपिओलाई क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी केयर रेटिङ्गस् नेपालले ‘ग्रेड ४’ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था औसतभन्दा कमजोर रहेको बुझाउँछ।
गण्डकी प्रदेश, नवलपुर जिल्ला, गैडाकोट न.पा. वडा नं. ०२ कालीगण्डकी चोकमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ०७३७४ मा ५९ लाख ७४ हजार नोक्सानीमा रहेको थियो भने गत आवमा ५३ लाख ३७ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ।
विवरणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार लघुवित्तले चालु आवमा एक करोड २४ लाख खुद नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेपनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म २ करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरिसकेकाले लघुवित्तले चालु आवमा ३ करोड खुद मुनाफा गर्ने देखिन्छ ।